निर्देशक नवल नेपाललाई चाहियो नकारात्मक प्रतिक्रिया « Ramailo छ
निर्देशक नवल नेपाललाई चाहियो नकारात्मक प्रतिक्रिया
आफुले गरेको कामको प्रतिक्रिया सकारात्मक आइदियोस् भन्ने सबैको चाहाना हुन्छ । नकारात्मक प्रतिक्रियाले मन दुख्नु मानविय स्वभाव हो । तर फिल्म ‘मारुनी’ का निर्देशक नवल नेपाल भने सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक प्रतिक्रियामा रमाउने व्यक्तिमा दर्ज भएका छन् ।
प्रसंग हो, फिल्म ‘मारुनी’को ‘जाम्न माया जाम’ गीत रिलिज कार्यक्रमको । मंगलबार गीत रिलिज कार्यक्रममा आफ्ना कुरा राख्ने क्रममा निर्देशक नेपालले गीतबाट नकारात्मक प्रतिक्रिया पाए आफ्नो टिम धेरै खुसी हुने उल्टो कुरा गरे । उनले भने, ‘गीतले नकारात्मक प्रतिक्रिया पाए हामी धेरै खुसी हुन्छौं । सकारात्मक पाए थोरै खुसी हुन्छौं ।’ यसको अर्थ के ‘मारुनी’को गीत नकारात्मक प्रतिक्रिया पाउने प्रकारको बनेको हो त ? भन्ने हुन्छ ।
तर, ‘मारुनी’ को गीत नराम्रो नै भन्नु पर्ने नबनेको भिडियोमा आएका प्रतिक्रिया बाट पनि स्पष्ट हुन्छ । यसो हो भने फिल्मका निर्देशकले किन गीतबाट नकारात्मक प्रतिक्रियाको बढी आशा राखे त ? किनकी केही व्यक्ति राम्रो कुरा आउन नराम्रो भनिदिनुस् है, भन्ने धारणा व्यक्त गर्दछन् । यस्तै मध्येमा नर्देशक नेपाल पनि परेका हुन् ।
यस्तै फिल्म ‘मारुनी’ चाहिं कस्तो बनेको होला त ? धेरै आशा राख्दा दुःखी हुन सक्नेछौं । तर हामी के कुरामा ढुक्क हुनेछौं भने फिल्मलाई हामीले सन्तुष्टि दिनेछ, नेपाल भन्छन् । पुनम क्षेत्री गौतमले निर्माण गरेको फिल्म ‘मारुनी’ मा पुष्प खड्का र साम्राज्ञीराज्य लक्ष्मी शाहको मुख्य भूमिका छ । फिल्म भदौ १३ गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ ।